Izindaba - Izinhlobo zeShower Mixer
Kunomehluko omkhulu phakathi kwe- ompompi beshawa ngokusebenza kahle kanye nompompi wokugeza ongenzi kahle. Kompompi weshawa osebenza kahle, umphumela wawo wokonga amanzi muhle kakhulu, futhi noma uvulwa uvaliwe izikhathi eziyi-100000, ngeke uvuze, ongonga amanzi amaningi. Ngakho-ke kungcono ukhethe ompompi beshawa besimanje bobuchwepheshe obuphezulu.
Ukudiliza ishawa, sinokuqonda okuluhlaza kwezingxenye zayo ezahlukahlukene. Akunandaba ukuthi iyiphi ingxenye eyingxenye ebalulekile ye-ishawa, idlala indima engenakubuyiseka emsebenzini wansuku zonke weshawa.Umsebenzi obaluleke kakhulu futhi obalulekile weshawa ulawulwa ngumzimba oyinhloko ompompi.Ishawa ejwayelekile emndenini imvamisa inezindlela ezahlukahlukene zokukhipha amanzi. Ngaphandle kokulawulwa komzimba omkhulu ompompi, akunakwenzeka ukubona indawo yokuhambisa amanzi bese ushintsha izindlela ezahlukahlukene zokuphuma kwamanzi. Kubaluleke kakhulu ukukhetha umzimba oholayo onempahla eqinile nobuchwepheshe obuphezulu.
Shower ompompi igobolondo uhlukile, umsebenzi wehlukile, kunezinhlobo ezintathu zompompi igobolondo emakethe, zingumgogodla we-ceramic disc valve, i-valve yensimbi engenasici ne-roll type valve core, phakathi kwayo lapho intengo ye-ceramic disc valve core iphansi kakhulu, ukungcoliswa kuncane kakhulu, kepha kulula ukuphula; i-valve yensimbi engagqwali, enokuqukethwe kobuchwepheshe obuphezulu, ingalawula ngokunembile izinga lokushisa kwamanzi, ingonga amandla namanzi; Uhlobo lwe-roll spool, olulula ukusebenza, ikakhulukazi ukujikeleza okubushelelezi, kepha futhi kunezici zokuguga nokugqoka ukumelana.
Okuzenzakalelayo lokushisa njalo ishawa’s ukuxuba i-valve kunomsebenzi wokushisa kwamanzi okuzenzakalelayo njalo. Ngemuva kokuthi izinga lokushisa lamanzi lisethwe ngokwezidingo zangempela, izinga lokushisa lamanzi lisheshe lifinyelele futhi lihlale likhona ngokuzenzakalela, elingathintwa yizinguquko zamanzi abandayo namanzi ashisayo okungena, ukushisa noma ukugeleza kwamanzi, ukuze kuxazululwe inkinga yokushisa okungazelelwe okubandayo nokushisa kwamanzi enqubeni yokugeza. Lapho ingcindezi yokungena, ukushisa noma ukuphuma kwamanzi okubandayo noshisayo kushintsha, ushintsho lwethempelesha lokushisa lungaphakathi± 2 ℃.Ngaphezu kwalokho, i-valve yokuxuba amanzi ye-thermostatic inemisebenzi yokuvimbela ukushisa nokushaqeka okubandayo. Ngenkathi ugeza, lapho amanzi abandayo ephazanyiswa ngokuzumayo, i-valve yokuxuba amanzi e-thermostatic ingavala ngokuzenzakalela amanzi ashisayo ngemizuzwana embalwa, edlala indima yokuvikela ukuphepha ekushiseni; lapho amanzi ashisayo ephazanyiswa kungazelelwe, i-valve yokuxuba amanzi ye-thermostatic ingavala ngokuzenzakalela amanzi abandayo ngemizuzwana embalwa, edlala indima yokuvikela ukuphepha ekushayweni amakhaza.
Khetha okuhle ikhanda leshawa, kungukuqala kweshawa enhle, khetha okufanelekile ngempela ekhanda labo lokugeza lekhwalithi ephezulu.